Soo Noqoshadii Xujaajta | Somaliland Post
Home Maqaallo Soo Noqoshadii Xujaajta
W.Q: Maxamed Haaruun – August 24, 2019
Isku soo wada duub, xajka dunnuubta ayaa la iskaga maydhaa – Ilaahay xaajiyada ha ka maydho wixii ay dunuub galeen ee ciidaha ka badnaa oo dhan. 1991 kolkii dalka la soo galay, rag ay labadoodu u horeeyaan waxa ay abaabuleen dagaalo lagu hoobtay oo bilaa micne ahaa. Ujeedkoodu waxa uu ahaa in ay curyaamiyaan dawladdii waagaas oo nimankii hoganka u ahaa, sida Cabdiraxmaan-tuur iyo Xassan Ciise) ay ku kacsanaayeen, laakiin waddanka oo dhan ayay curyaamiyeen. Hooyooyin badan oo hal amaba laba wiil uga soo badbaadeen dagaaladii Maxamed Siyaad lala galay, ayay goblamiyeen. Dhalintii doonaysay in ay hubka iska tiiriyaan, ayay ku kalifeen in ay qoriga dib u qataan, oo mid waliba kii ay shalay wada socdeen uu xabad ku dhufto. Ujeedka u wayn, ee u wayn, ee waxaasi ay u dhacaayeen waxa uu ahaa keliya siyaasad iyo is diiddo heer shakhsi amaba shakhsiyaad joogtay, oo aan sinaba u istaahilin in darted ay hooyooyin u goblamaan. Nimanka ay xabadda u qaateen, ee ay dartood buuraha u galeen ba waxa la siiyay wakhti gaaban oo laba sanadood ah, kolka ay dhamadaan na si bilaa hawl iyo bilaa godob ah ayay xukunka ku raadsan karaayeen, laakiin sabab ay ka ahayd ba, sidaas ma ay doonaynin. Waa run, siyaasiyiintu kolka ay hebel is hayaan, ee ay mucaarid ku yihiin, ma miisamaan khasaaraha ka dhalan kara waxa ay waddaan, taa waagas ee Xaaji Muuse iyo Xaaji Kaahin, ayaana tusaale fiican u ah. “Godobtaada meelee intaan, Gacantu kaa boobin.” Waa sababtii uu Gadhle u lahaa.
Waa xiligii uu Gaariye (IHUN) isaga oo canaananaaya qoladii hogaanka haysay, (Cabdiraxman-tuur, Xassan Ciise iyo Xassan Yoonis), isla markaana tilmaamaaya foolxumada ay geysteen mucaaridkii hubaysnaa ee Xaaji Muuse iyo Xaaji Kaahin ay hormuudka u ahaayeen ee buuraha galay, waakii lahaa: